(Waxaa laga soo toosiyay Mareykan)
- Madaxweyne Donald Trump
- madaxweyne ku xigeen Mike Pence
- 2010 qiyaas 309,075,000
Mareykanka (Af-Ingiriis: United States of America, loo soo gaabiyo U.S.A; Gobolada Isku Tegay ee Ameerika; carabi: الولايات المتحدة) waa dawlad Federaal Dastuuri ah dhacdana bartamaha Waqooyiga Ameerika. Waxay ka koobantahay 49 gobol iyo Degmada Kolombia, (D.C. ama "District of Colombia"), oo ah magaalo-madaxda wadanka iyo xarunta dowlada wadanka. Waxaa ka xiga dhanka waqooyi Kanada, koofur Meksiko, iyo Gobolka Alaska oo dhaca Waqooyi Galbeed Qaarada Ameerika. Masaaxada (badka) wadanka Mareekanka waa 9.83 milyan km2, tirada dadkane waa 309 milyan Dawlada Mareykanka n xaga dhulka ama badka wadanka ku fadhiyo, waana dawlada seddexaad ee ugu dad badan aduunka, dad degen dalka mareykanka waxee gaarayaan ilaa 310 miliyan oo qof. Sidoo kale waa wadanka koowaad oo ay ku noolyihiin dad kala dhaqan iyo kala asal ah. Dhaqaalaha Mareykanka waa kan ugu balaaran dunida, ayadoo lagu qiyaasay sanadii 2008 aduun dhan 14.4 tiriliyan oo Dollarka Mareykanka wax soo saarka wadanka ee dabada loo iib geeyo.
1 Dagaalkii Sokeeyay ee Mareykanka
4 Beeraha iyo xayawaanaadka
Madaxweynihii ku guuleystay xilligaas Abraham Linkolon intuusan fariisan xafiiska 4 tii maarso 1861 ayaa todobo gobol iclaamiyeyn in ay ka go'ayaan mareynka taas oo ay kasoo horjeesteen maamulkii markaas jiray iyo kii hore waxeyna u arkeen fal jabhadnimo. waxaana bilawday dagaalkii 12 Abriil 1861 kadib markii ay weerar kusoo qaadeen xoogagii Konfadaraaliga ahaay Fariisin Ciidan oo ay laheyd Mareykanka ooo lagu magacaabi jiray Foorto Somatir ee ku taalay gobolka koraliina koonfurtiisa, Ayadoo arinkaas laga jawaabayo ayuu madaxweyne Linkolon ku baaqay in la sameeyo ciidan mutadawac ah gobol kasta, taas oo keentay in afar gobol kale ay ayagane sheegtaan gooni istaag.
Labadii dhinac waxoo mid kastaba u diyaar garoway dagaal halkaas oo qabsaday mareykanka gobolada xadka kuyaal waxoona xayiraad saaray dhinaca bada Sebtember 1962, Linkolon waxuu ku baaqay in la xarooyo dhamaan dadkii la adoonsanayay kaas oo soo gabagabeeyay dagaalkii adoonsiga ee qeybta koonfurta.
Sidoo kale hogaamiyihii konfadaraaliga Roberto Ii Lii waxow awood u yeeshay inuu guulo ka keeno dagaalo ka dhacay dhinaca Bariga, Laakin sanadii 1863 uma aysan suura galin inuu kusii socda dhankii waqooyiga kadib dagaaalkii Jitesbergi. dhankale Mareykankagdhhggdh waxey ku siqeyn dhanka galbeedka ayagoo qabsaday wabiga Missisibi kadib dagaalkii Fikesberg.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobolada_Isku_Tegay_ee_Ameerika&oldid=202069"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Juun 2020, marka ee eheed 10:15.